Mayelana NATHI - Funlandia
Umhlinzeki Wesisombululo se-Turn-Key Play
Njengomkhiqizi wenkundla yokudlala yasendlini ongaphandle waseChina, iFunlandia inikeza izixazululo zokudlala zasendlini zamakhasimende emhlabeni jikelele. Simboza yonke inqubo kusuka ekwakhiweni okuningiliziwe ekukhiqizweni nasekufakweni, sihlinzeka ngezindawo zokudlala ezisezingeni eliphakeme nezingabizi.
Ithimba lethu lamazwe ngamazwe lokudala lilwela ukudala izixazululo zemidlalo yangaphakathi yokudlala ngokuqamba okuqanjiwe okuhlangana kahle esikhaleni seklayenti. Imiklamo ihlose ukudala isipiliyoni sokudlala se- "fusion" esinqobe umkhawulo wesikhala ngomklamo wethu wemishini yokudlala eguquguqukayo.
Idizayini yethimba lethu lihlose ukukhulisa ukuthengisa nokwenza ngcono isipiliyoni samakhasimende. Senze ngezifiso amaphrojekthi wokudlala womndeni wasendlini namaphrojekthi anezindikimba ezikhala ezisukela ku-100㎡ kuya ku-10000㎡. Amandla ethu obanzi e-R & D kanye nokukhiqiza aqinisekisa ukuqaliswa nokusebenza ngempumelelo kwemiklamo yethu.
Sihlangabezana nezindinganiso ezinzima kakhulu zokuphepha embonini: indinganiso ye-ASTM yase-USA kanye ne-EN standard yaseYurophu. Lawa mazinga asebenza njengeziqondiso zezinhlelo zethu zokuklama nokukhiqiza. Sisebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme futhi sisebenzisa ubuchwepheshe bamuva ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu yemishini yethu yokudlala. Imigqa yethu yomkhiqizo, ebanzi kakhulu embonini, ivuselelwa njalo ukuze amakhasimende abe nemikhiqizo emisha kakhulu okwamanje ezandleni zabo.
Njengamanje, iFunlandia inabalingani emazwenikazi ayisithupha kanye nabasebenzi abangaphezu kwama-260 eqenjini lomkhiqizo nesevisi lomhlaba jikelele. Amaphrojekthi wokuhlanganisa wokuzijabulisa asendlini angaphezulu kwe-1000 aphothulwe ngempumelelo, kujabulisa imindeni eyizigidi ezingama-20 emhlabeni jikelele.
Ukwakha umdlalo onenjongo wemindeni
Siqale umsebenzi we-OEM wemikhiqizo edumile yaphesheya
Isiteji se-OEM samakhasimende aphesheya: Ngokukhiqizwa kwe-OEM kokuzijabulisa okuningi okudumile kwamazwe omhlaba nemikhiqizo yemishini yokudlala, sifunde izindinganiso zokuphepha zomhlaba wonke zokwakhiwa kwemishini yokudlala yasendlini kanye nenqubo yokukhiqiza ikhwalithi yokuqala.
IFunlandia ibhaliswe ngokusemthethweni futhi yaqala ukukhangisa ngohlobo lwayo lwemishini yokudlala yasendlini emakethe yamazwe omhlaba.
Indlunkulu yaseFunlandia Isungulwe
Isikhungo sethu sokukhiqiza saseShanghai sesisunguliwe. Iyaziwa ngokuphepha kwayo namazinga ekhwalithi ahlangabezana futhi adlule lawo aseNyakatho Melika naseYurophu, athola ukubonwa okugcwele kumakhasimende aseChina nakwamanye amazwe.
IFunlandia ibe ngumhlinzeki ovelele we-Turn-Key Play Solution eMakethe Yomhlaba Wonke
Umkhiqizo wethu uqobo waziwa kakhulu emakethe yamazwe omhlaba futhi ube ngomunye wemikhiqizo efunwa kakhulu eChina.
IFunlandia iholele ukuthambekela emisha kwemboni yokudlala yasendlini yaseChina kanye nomkhakha wokuzijabulisa
IFunlandia ibambe iqhaza emibukisweni eminingana yamazwe omhlaba futhi yethula imishini yokuzijabulisa ehamba phambili emhlabeni wonke "i-SKYMAZE" (i-3D maze eguquguqukayo) kanye ne- "DROP -SLIDE" eChina.
Isikhungo Sokukhiqiza Nentuthuko saseFunlandia Sisunguliwe
Isikhungo sethu sokukhiqiza iSuzhou sasungulwa sinabasebenzi abangaphezu kuka-260 nendawo yefektri enkulu ngokwanele ukubamba amamitha-skwele ayi-15,000 amahle.
Uhlobo lweFunlandia's Action Planet lusungulelwe ukukusiza uthathe umhlaba
I- "Action Planet" yethu ihola ukuthambekela okusha kwe- "Sports Game Play," futhi inakwa kakhulu! Abantu bayasithanda isikhungo sethu saseMelika Sokuzijabulisa Komndeni.
IFunlandia Iqale Ukubambisana Kwamasu kanye Nemikhiqizo Ehola Emazweni Omhlaba
Sisungule ukubambisana okukhulu nemikhiqizo emikhulu yamaShayina neyamazwe omhlaba kanye nemikhiqizo yokudlala yasendlini ezokwaziwa njengenjini entsha yenkundla yokudlala yasendlini kanye nommeleli wemishini esezingeni eliphakeme emakethe yomhlaba.
I-ThunderFox Design yasungulwa
Inkampani ephethwe ngokuphelele yiFunlandia yedizayini "iThunderFox" isungulwe ukuhlinzeka amakhasimende ngezixazululo zomkhiqizo nezinsizakalo kusuka kumqondo kuya ekusetshenzisweni.
IFunlandia ivula iFrontier entsha ku-Sports Play
Sithathe "ukuzijabulisa kwezemidlalo ngezinga elikhulu" futhi sikubeka ezandleni zamakhasimende ethu, ngamaphrojekthi amahle angagcini nje ngokuthola isitifiketi se-TÜV kodwa futhi asisiza ukuthi sakhe ubambiswano. Manje sesikulungele noma yisiphi isithiyo esiphonswe kithi!
- UMKHIQIZO IZINGA -
- IZINGA LOKUPHEPHA -
- ISITifiketi -
- Ozakwethu -
Copyright 2010-2021 funlandia.com Wonke Amalungelo Agodliwe. Hot ProductsIbalazweIzindleko Zasendlini Yokudlala Yangaphakathi, IBig Air Trampoline Park Franchise, Izingane Zabakhiqizi Bendawo Yokudlala, Dlala Izinsiza Zezingane, Ukwenziwa kweTrampoline Park, Izinsiza kusebenza ze-Adventure Indoor Playground,